I-China Shower Hose Abavelisi kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Ihose yeshawari
Ihose yeshawari Abavelisi
Imibhobho yeshawari yahlulwe yaba yimibhobho yentsimbi engatyiwayo kunye nemibhobho yePVC, zombini ezinokuthi zisetyenziswe ngeeshawa kunye neebhidethi. Izinto ezikrwada ziyakwazi ukumelana ne-corrosion, high-temperature resistant, kunye ne-interface jikelele yamazwe ngamazwe, ifanelekile kwiimveliso ezininzi zegumbi lokuhlambela, ubude buqhele ukuba yi-1.2m/1.5m/1.8m, kwaye inokwenziwa ngokwezifiso.
Ixhotyiswe ngoomatshini abatsha beplastikhi abalawulwa yikhompyutha; Iinkqubo zokuvavanya eziphucukileyo kunye noomatshini bokupakisha be-blister abalungileyo, siyakwazi ukukunika umgangatho we-Shower hoses njengoko kufuneka. Ngokumalunga nokupakisha, silungile ekupakisheni amadyungudyungu kunye neebhokisi zemibala, ewe, sinokubonelela ngokupakisha okukhethekileyo ukuba abathengi banemfuno. Njengomvelisi, sineziko lethu lokubumba, iinjineli ezinamava zilungele ukwenza naluphi na uphuculo lohlengahlengiso olucelwe nguwe ngexesha elikhawulezayo.
Le hose yeshawari ekhazimlisiweyo yentsimbi yokutshixa kabini, nabuphi na ubude obukhoyo
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Ihose yeshawari zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Ihose yeshawari uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.